Zavakanto mahavariana nataon'i Tiffany Turrill | Famoronana an-tserasera
Tiffany turrill mamorona sary mahafinaritra ho an'ny fonony bokin-jaza, boky misy sary, anjara asa, lalao y lalao video. Liana amin'ny angano, tantaram-pirazanana ary ny haben'ny tantara amin'ny tantara izy, saingy manana toerana manokana ao am-pony ho an'ny dinôzôro. Mipetraka any San Francisco Bay izy.
Tiffany Turrill dia fanoharana manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana ny lalao video ary ao amin'ny famolavolana boky ho an'ny ankizy, tantara voajanahary na mahafinaritra. Iray amin'ireo sanganasa farany nataony ny fanoharana momba ny bokin'ny tanora Dinosaurus alohan'ny hatory, izay andiana ankizy iray manomboka amin'ny diany lasa mba hianatra momba ny fahasamihafan'ny tany amin'ny dingana voalohany.
Ilay mpanakanto izay manao ny zava-drehetra amin'ny pensilihazo, dia mpaka sary sy mpanakanto lalao video mifototra amin'ny fiainana sy miasa ao amin'ny faritr'i San Francisco ihany koa. Tiffany dia mamorona sary izay ahitana toetra, zavaboary ary endrika tontolo iainana amin'ny haino aman-jery isan-karazany.
Tiffany dia mahavariana ary tsy nanana ahiahy momba ny fizarana azy izy lisitry ny fitaovana.
Mampiasa pensilihazo Alvin .5mm aho, pensilihazo mekanika mitarika HB, pensilihazo zebra M-301 .5mm, pensilihazo mekanika mitarika HB. Vao haingana kokoa aho no mampiasa Palomino Blackwing, Blackwing 602, ary Blackwing Pearl. Tiffany Turrill.
Ho fanampin'ny sary pensilihazo, Mamorona sary hosodoko nentim-paharazana i Tiffanys, ary koa sary hosodoko nomerikas. Na inona na inona medium, ny zavaboary Tiffany rehetra dia samy manana ny fombany. Ny sombintsombiny tsirairay koa dia miaraka a famaritana feno ny antony sy ny fomba namoronana azy, ary ny sasany aza manana backstory momba ilay lohahevitra aseho. Ireo antsipiriany kely ireo dia mahatonga ny fizahana amin'ny alàlan'ny galerie Tiffany mahafinaritra.
Fuente [Tiffany turrill]
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Kanto mahavariana nataon'i Tiffany Turrill